မြန်မာပြည်ကိုရေးလိုက်တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ စာ တစ်စောင် ပွဲဆူလျက်ရှိ… - Khitalin Media
အိပ်လို့လည်း မရပါဘူးကွာ ကဲ ဘယ်နေရာက ဘယ်လိုပါပေးရမလဲပြော .အဖြေတော့ လိုတယ် နော် .မှန်ကန်တဲ့ အဖြေဖြစ်ပါစေ .
ဆဲနေတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူးနော် .မုန်းတီးရေး က အဖြေ မဟုတ်ဘူးနော် အမေစုကို အေးချမ်း ချမ်း ပြန်မြင်ရဖို့ ကအဖြေနော်.အမေစု ကို ကျွန်တော် ယုန်လေး ချစ်ပါတယ် ဆိုတာ ပါးစပ်က အ မြဲ တန်း ပြောပြီးသားနော် .
Post တွေ ဘာမှ မဖြတ်ထားဘူး .NLD အောင်ပွဲ ခံနေတဲ့ ၁၁ လပိုင်း ၁၀ ရက်လား ၁၁ လား ၁၂ ရက်လား တစ်ခုခု ပဲ NLD ရုံးရှေ့
အပြန်လမ်းမှာ NLD လူအုပ်နဲ့တိုးတယ် .Live မဖြတ်ထားဘူး နော် . Mandalay တာကျိုးတဲ့ အချိန် တင်ထားတာတွေ စည်းလုံးရေးကို လူံ့ဆော်ထားတာ ငြိမ်း ချမ်း ရေးကို လူံ့ဆော်ထားတာတွေ မဖြတ်ထားဘူး
ICJ သွားတဲ့ အချိန် ဝန်းရံထားတယ် . အမေ့ကို ချစ်တယ် . .NlD ကို တော့မထောက်ခံဘူး ဆိုတာ Post မဖြတ်ထားဘူး .အဲ့ မှာ မင်းတို့
ထပ်ဆဲဦးမယ် . လီးမို့ NLD မထောက်ခံတာလားလို့ . အမေ စုကို ချစ်တာ အမေ့ကိုချစ်တာလေ . NLD က လူပေါင်းစုံပါတာ ငါချစ်ချင်မှ ချစ်မှာပေါ့ .မထောက် ခံတာ ဆန့်ကျင့်တာလည်း မဟုတ်ဘူး .မင်းတို့သာ ကိုယ့်ကို မထောက်ခံရင် ဆန့်ကျင်တယ်လို့ထင် နေတာ
မင်းတို့ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီဆိုဟိုတစ်ခေါက် စည်းလုံးရေး သီချင်းကိစ္စမှာုင်းဆဲ ကျ တယ် . စိတ် ဓာတ် နဲ့ ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝတွေပါဝိုင်းသတ်ကျတယ် အနီ လော်ဘီတွေ နဲ့ တစ်ချို့နိုင် ငံရေး ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ် . ဘယ်ဘက်မှ မပါဘူးလို့
ဆုံးဖြတ်တယ် . သီ ချင်း ကိစ္စ နောက်ဆုံး LiveAug7မဖြတ်သေးဘူး ဒီတိုင်းထားထားတယ် .Aug6မှာ နိုင်ငံ ရေး နဲ့ ပက်သက်ရင် ဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်ဘက်မှ မပါဘူးကြောက်သွားပြီလို့ ပြောခဲ့ပြီးသား . အဲ့တုန်းက လဲ ဆဲတယ် .အခု ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူဒီလိုဖြစ်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာ တစ်ကြောင်း .ဘာမှ နား မလည်တဲ့ ကိစ္စ မသိလို့ ဝင်မပါတာ ထပ်ဆဲတယ် . မင်းတို့တွေက ဘာလဲ .
Fb မှာ အော်မနေနဲ့ ထောင်ထဲ အတူဝင်ကျမယ်လာ ဒီအချိန်ကျရင်တော့ နှစ် အကန့်သတ်မရှိပဲ .Fb မှ မအော် နဲ့ လာထွက်မယ် . ဘယ်ကို ထွက်လာရမလဲ . လူမိုက်ပါဆိုတဲ့ ကောင်တွေ နဲ့ ဒဲ့တိုး မလား စောက်ဂရုကို မစိုက်တာ .မင်းတို့စငြော်ပြီး အဲ့ကျမှ မပြေးကြေး
နော် . Music Video က ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ရိုက်ခဲ့တာ ဒီလို ပေါင်းရင် ကောင်းမယ် . ဒါကိုရိုက်ခဲ့တာဖြစ်မယ့် အရာကို ကြိုမှန်းနိုင်ရအောင် ငါအကြားမြင်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး
ဒီ အချိန် တကယ်ဖမ်းနေပြီဆိုတာ အကုန်သိတယ် .အရေးပေါ် အခြေနေ . Fb မှာ တစ်ဖတ်စွန်း ရောက် ဆဲဆိုနေတဲ့ လူတွေ လည်း ဖမ်းချင်ရင် ဖမ်း နိုင်တယ် .ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုစောက်ကြောက်လို့ ထင်ရင် အခု ထွက်ခဲ့မယ် .ဘယ်ထွက်ခဲ့ ရမလဲ ပြော .အယ်မှာ လိုရာထပ်ဆွဲမယ် ယုန်လေးစတဲ့ နောက် မပါကျပါနဲ့ သူက အရေးခင်းဖြစ်အောင် စနေတာဆိုပြီးလော်ဘီ တစ်ချို့ နည်းတစ်မျိုး နဲ့ ထပ်ပတ်မွှေဦးမယ် .
မအေလိုးတွေ မင်းတို့ သူတောင်းစား လော်ဘီအကွက်တွေ ကြိုသိပြီး သား .ဘာလုပ်လုပ်ဆဲပြီး သား . လူတစ်ယောက်ကို ဘာလုပ်လုပ် အမှန်မရှိအောင် ဂျောင်ပိတ်ရိုက်တာ .ဘယ်သူ့မှ မထွက် ရင်လဲ ငါ့စကား နဲ့ ငါ .အမေ့ စု ပုံ ပါတဲ့ အကျီ တွေ ဒီ အချိန် မရောင်းလောက်တော့ဘူး . အမှတ် တရ အနေ့နဲ့ လက်မှတ်ပါတဲ့ အကျီ လေး ၂၀၁၃ တုန်းက အကျီ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်မယ် . မရှိရင် လည်း အနီ ဝတ်ပြီးတစ်ကောင်ထဲ ထွက်လာပေးမယ် . live လွှင့်ပေးမယ် .ငါတစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် လည်း ရတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး.စတေး မူ့ တစ်ခုလို သဘောထားတယ် .
အဲ့ဒါ ပရိတ်သတ်တွေလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး .စပြီး ဦးဆောင်တဲ့ မီးမွှေးတဲ့ ပြေလည်ရာ ပြေလည် ကြောင်း မဖြေရှင်းတဲ့ လော်ဘီနဲ့ အကောင့်တု သိန်း နဲ့ ချီ ကိုင်ထားတဲ့လူတွေရိုး သား တဲ့ ပရိ တ်သတ်တွေကို ချယ်လည် နေတဲ့ လူတွေ နောက် ဒါမျိုး မလုပ်ဖို့ပဲ တောင်းဆိုတယ် . ပရိတ်သ တ်တွေထဲ မှာ တစ်ချို့တွေ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူတွေ ရှိတယ် . ကိုယ်ပိုင် အသိညဏ် နဲ့ အမှား အမှန် အဖြေ မရှာတတ်သေးတဲ့ လူတွေ ရှိတယ် .စလိုက်တာ နဲ့ အဖြေမဟုတ်တဲ့ အမှားကြီး ကို သွေး ဆူပြီး လိုက်တတ်တယ် . အားလုံး ဘာလုပ်လုပ်စဉ်းစားစေချင်တယ် .
၅ နှစ်လုံးလုံး တပ်မတော်ကို နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ USDP ကိုလည်း နည်းပေါင်းစုံ နဲ့ PPP ကိုနည်း ပေါ င်းစုံနဲ့ အရောင်းမတူသူတိုင်းကို ပေါင်းစုံဆဲ ခဲ့တာ အဖြေလား ငါ့ကို ဘာမှ မလုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့စ ည်း တွေကို ငါအမုန်း မရှိဘူးလေ မင်းတို့လို လိုက်မမုန်းလို့ ငါ့ကိုဘောမဆိုတော့မအေလိုး လော် ဘီတွေ မင်းမေသာ မင်းတို့လိုးလိုက်တော့ .
လောဘီ နဲ့ Blame နဲ့ လဲ မတူပြန်ဘူး .Blame တာ အပျော်သက်သက် . ဒါပေမယ့်စဉ်းစားပါ . BLAME တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတွေလည်းအခု နိုင်ငံပါ ထိပြီ . အဲ့ဒါ ကောင်းလား အမုန်းတရား တွေ စလူံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ လူများ ကိုယ့်လုပ်ရပ် မှန်ခဲ့ သလား စဉ်းစားပါ .နောက်တစ်ချက်မင်းတို့ ဆဲ ဆိုပြီး လာလာဆွနေတာနော် .ငါ့ကိုမှ မဟုတ်ဘူး . အနီ မချိန်းတဲ့ အနုပညာရှင်တိုင်းကို အဲ့ဒါက ရောအဖြေလား . အစ်ကို မချိန်းဘူးလား .အစ်မ မဝန်းရံ ဘူးလား လေသံမျိုး မဟုတ်ဘူးနော် ပရိတ်သတ်ရဲ့ ထမင်းကို စားပြီး ဘာညာ အခုချိန်းစမ်း ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ အမိန့်ပေးတဲ့ လေသံ နဲ့ ပြောဆို ဆဲဆိုပြီး ချိန်းခိုင်းတယ် . အနုပညာရှင်တွေ တော်တော် များများက ပရိတ်သတ်ကို ကြောက်တယ်
ငါကိုယ်တိုင် လည်း ကြောက်တယ် . ချစ်တယ် .ဒါပေမယ့် စပြီး ဦးတည် ဆဲ ဆိုတာ ပရိတ်သတ် အစစ်တွေမဟုတ်ဘူး . နိုင်ငံကို ဖြတ်နေတဲ့ လော်ဘီ အကောင့် အတု နဲ့ ကိုယ်မေကိုလိုးတွေ
အမေ့ကို အခုလို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာတစ်ဖတ်ပိတ် လော်ဘီ မအေလိုးတွေပဲ FB Fake Acc ပေါင်းများစွာ ကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်စုတွေပဲ .
အခု Live နဲ့ သွားမယ့်နေရာကို လွှင့်ပေးမယ် .Videoကို အတို အစတွေ ထပ်ဖြတ်ညပ်လုပ် လိုရာဆွဲတင်ဦးမယ် . ဒါတွေက နိုင်ငံကောင်းနိုင်မယ်ဆို ဆက်လုပ် .ဟိုလူကို ဆဲ ဖို့ ဦးဆောင် ဒီလူကို ဆဲဖို့ ဦးဆောင်ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူတိုင်း ဆဲဖို့ ဦးဆောင်ဒါတွေ ကောင်းတယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်UN ကိုခေါ်တယ် . ဟိုက လာရင် လေကြောင်းက လာမှာ တန်းပစ်မှာ . ငါတို့ မြို့စစ်မြေပြင် ဖြစ်မှာ .ငြိမ်းချမ်း မူ့ နဲ့ အဆင်အပြေဆုံး အဖြေကို ရှာတွေ့နိုင်ပါစေ . Fb ကို အကျိုးမရှိတဲ့ ဘက်ကကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ပိုအသုံးချခဲ့ကျတယ် .ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆဲမယ် ဆိုတာတွေ ပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့တယ် .
တစ်ချို့ အနုပညာရှင်တွေလည်း တစ်ချို့ကိုပဲပြောတာနော် .အနုပညာဆိုတာ အနုပညာ လုပ်ဖို့ . အနုပညာကျတော့ ဘာမှ မလုပ်တတ် Like များရင်ပြီးရော .NLD ပုံရိပ်ကို အတန်းရှင် ယူခဲ့ ကျတယ် .၅ နှစ်လုံးမှာ မကြိုက်ဆုံးအချက်က အမှန် တရားမရှိဘူး Acc များရင် နိုင်တယ် . Fb နဲ့ အုပ်ချူပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်နေတယ် .နောက် နာစီဝက် ထွက်မယ် Live လွှင့်ပေးမယ် ကျွန် တော် နား ဘယ်သူ့မှလည်း ဝန်းရံတယ်ဆိုပြီး အနားမလာ နဲ့ အနားကပ်ရင် အကုန်ဓား နဲ့ထိုး မှာဒီ အချိန် ဘယ်သူ့မှ မယုံဘူး ပူးသတ်တဲ့ လူလည်း ဖြစ်နိုင်ချင်ဖြစ်မှာ ကာလက မရိုးရှင်း ဘူး . ကျွန်တော် ချစ်သော လူများ တစ်ယောက်မှ လာမဝန်းရံပါနဲ့ အနားလာကပ်ရင် ရန်သူပဲ .မိတ်ဆွေ ရန်သူ ကွဲနေအောင် မလာပါနဲ့
ကျွန်တော်တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင်တော့ နောက်အဲ့လို ဦးဆောင်တဲ့နောက်ကို မလိုက်ကျဖို့ .ကျွ န် တော့် ကို ချစ်သော .ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်အားပေးခဲ့သောကျွန်တော် ချစ်သော လူအယောက်စီတိုင်း ဆဲတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူး အမုန်းတရားဆိုတာ အဖြေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကို လက်ခံ ပေးကျပါ အဖြေက အားလုံး စည်းလုံးရမှာပါ ချက်ချင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် .ငြိမ်းချမ်းမူ့ ကို အခုထဲက ဦးတည်ကျပါ
အိပျလို့လညျး မရပါဘူးကှာ ကဲ ဘယျနရောက ဘယျလိုပါပေးရမလဲပွော .အဖွတေော့ လိုတယျ နျော .မှနျကနျတဲ့ အဖွဖွေဈပါစေ .
ဆဲနတော အဖွေ မဟုတျဘူးနျော .မုနျးတီးရေး က အဖွေ မဟုတျဘူးနျော အမစေုကို အေးခမျြး ခမျြး ပွနျမွငျရဖို့ ကအဖွနေျော.အမစေု ကို ကြှနျတျော ယုနျလေး ခဈြပါတယျ ဆိုတာ ပါးစပျက အ မွဲ တနျး ပွောပွီးသားနျော .
Post တှေ ဘာမှ မဖွတျထားဘူး .NLD အောငျပှဲ ခံနတေဲ့ ၁၁ လပိုငျး ၁၀ ရကျလား ၁၁ လား ၁၂ ရကျလား တဈခုခု ပဲ NLD ရုံးရှေ့
အပွနျလမျးမှာ NLD လူအုပျနဲ့တိုးတယျ .Live မဖွတျထားဘူး နျော . Mandalay တာကြိုးတဲ့ အခြိနျ တငျထားတာတှေ စညျးလုံးရေးကို လူံ့ဆျောထားတာ ငွိမျး ခမျြး ရေးကို လူံ့ဆျောထားတာတှေ မဖွတျထားဘူး
ICJ သှားတဲ့ အခြိနျ ဝနျးရံထားတယျ . အမကေို့ ခဈြတယျ . .NlD ကို တော့မထောကျခံဘူး ဆိုတာ Post မဖွတျထားဘူး .အဲ့ မှာ မငျးတို့
ထပျဆဲဦးမယျ . လီးမို့ NLD မထောကျခံတာလားလို့ . အမေ စုကို ခဈြတာ အမကေို့ခဈြတာလေ . NLD က လူပေါငျးစုံပါတာ ငါခဈြခငျြမှ ခဈြမှာပေါ့ .မထောကျ ခံတာ ဆနျ့ကငျြ့တာလညျး မဟုတျဘူး .မငျးတို့သာ ကိုယျ့ကို မထောကျခံရငျ ဆနျ့ကငျြတယျလို့ထငျ နတော
မငျးတို့ပွောတော့ ဒီမိုကရစေီဆိုဟိုတဈခေါကျ စညျးလုံးရေး သီခငျြးကိစ်စမှာုငျးဆဲ ကြ တယျ . စိတျ ဓာတျ နဲ့ ရှဆေ့ကျမယျ့ ဘဝတှပေါဝိုငျးသတျကတြယျ အနီ လျောဘီတှေ နဲ့ တဈခြို့နိုငျ ငံရေး ဆိုတာကွီးကို ကြှနျတျောကွောကျသှားတယျ . ဘယျဘကျမှ မပါဘူးလို့
ဆုံးဖွတျတယျ . သီ ခငျြး ကိစ်စ နောကျဆုံး LiveAug7မဖွတျသေးဘူး ဒီတိုငျးထားထားတယျ .Aug6မှာ နိုငျငံ ရေး နဲ့ ပကျသကျရငျ ဘာမှမလုပျဘူးဘယျဘကျမှ မပါဘူးကွောကျသှားပွီလို့ ပွောခဲ့ပွီးသား . အဲ့တုနျးက လဲ ဆဲတယျ .အခု ကိုယျခဈြတဲ့ လူဒီလိုဖွဈတော့ စိတျမကောငျးဖွဈရတာ တဈကွောငျး .ဘာမှ နား မလညျတဲ့ ကိစ်စ မသိလို့ ဝငျမပါတာ ထပျဆဲတယျ . မငျးတို့တှကေ ဘာလဲ .
Fb မှာ အျောမနနေဲ့ ထောငျထဲ အတူဝငျကမြယျလာ ဒီအခြိနျကရြငျတော့ နှဈ အကနျ့သတျမရှိပဲ .Fb မှ မအျော နဲ့ လာထှကျမယျ . ဘယျကို ထှကျလာရမလဲ . လူမိုကျပါဆိုတဲ့ ကောငျတှေ နဲ့ ဒဲ့တိုး မလား စောကျဂရုကို မစိုကျတာ .မငျးတို့စငွျောပွီး အဲ့ကမြှ မပွေးကွေး
နျော . Music Video က ဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒကို ရိုကျခဲ့တာ ဒီလို ပေါငျးရငျ ကောငျးမယျ . ဒါကိုရိုကျခဲ့တာဖွဈမယျ့ အရာကို ကွိုမှနျးနိုငျရအောငျ ငါအကွားမွငျရနတောလညျးမဟုတျဘူး
ဒီ အခြိနျ တကယျဖမျးနပွေီဆိုတာ အကုနျသိတယျ .အရေးပျေါ အခွနေေ . Fb မှာ တဈဖတျစှနျး ရောကျ ဆဲဆိုနတေဲ့ လူတှေ လညျး ဖမျးခငျြရငျ ဖမျး နိုငျတယျ .ဒါပမေယျ့ ငါ့ကိုစောကျကွောကျလို့ ထငျရငျ အခု ထှကျခဲ့မယျ .ဘယျထှကျခဲ့ ရမလဲ ပွော .အယျမှာ လိုရာထပျဆှဲမယျ ယုနျလေးစတဲ့ နောကျ မပါကပြါနဲ့ သူက အရေးခငျးဖွဈအောငျ စနတောဆိုပွီးလျောဘီ တဈခြို့ နညျးတဈမြိုး နဲ့ ထပျပတျမှဦေးမယျ .
မအလေိုးတှေ မငျးတို့ သူတောငျးစား လျောဘီအကှကျတှေ ကွိုသိပွီး သား .ဘာလုပျလုပျဆဲပွီး သား . လူတဈယောကျကို ဘာလုပျလုပျ အမှနျမရှိအောငျ ဂြောငျပိတျရိုကျတာ .ဘယျသူ့မှ မထှကျ ရငျလဲ ငါ့စကား နဲ့ ငါ .အမေ့ စု ပုံ ပါတဲ့ အကြီ တှေ ဒီ အခြိနျ မရောငျးလောကျတော့ဘူး . အမှတျ တရ အနနေဲ့ လကျမှတျပါတဲ့ အကြီ လေး ၂၀၁၃ တုနျးက အကြီ ပွနျရှာကွညျ့လိုကျမယျ . မရှိရငျ လညျး အနီ ဝတျပွီးတဈကောငျထဲ ထှကျလာပေးမယျ . live လှငျ့ပေးမယျ .ငါတဈခုခု ဖွဈသှားရငျ လညျး ရတယျ ဘာမှမဖွဈဘူး.စတေး မူ့ တဈခုလို သဘောထားတယျ .
အဲ့ဒါ ပရိတျသတျတှလေုပျတာ မဟုတျဘူး .စပွီး ဦးဆောငျတဲ့ မီးမှေးတဲ့ ပွလေညျရာ ပွလေညျ ကွောငျး မဖွရှေငျးတဲ့ လျောဘီနဲ့ အကောငျ့တု သိနျး နဲ့ ခြီ ကိုငျထားတဲ့လူတှရေိုး သား တဲ့ ပရိ တျသတျတှကေို ခယျြလညျ နတေဲ့ လူတှေ နောကျ ဒါမြိုး မလုပျဖို့ပဲ တောငျးဆိုတယျ . ပရိတျသ တျတှထေဲ မှာ တဈခြို့တှေ ငယျရှယျတဲ့ လူတှေ ရှိတယျ . ကိုယျပိုငျ အသိညဏျ နဲ့ အမှား အမှနျ အဖွေ မရှာတတျသေးတဲ့ လူတှေ ရှိတယျ .စလိုကျတာ နဲ့ အဖွမေဟုတျတဲ့ အမှားကွီး ကို သှေး ဆူပွီး လိုကျတတျတယျ . အားလုံး ဘာလုပျလုပျစဉျးစားစခေငျြတယျ .
၅ နှဈလုံးလုံး တပျမတျောကို နညျးပေါငျးစုံ နဲ့ USDP ကိုလညျး နညျးပေါငျးစုံ နဲ့ PPP ကိုနညျး ပေါ ငျးစုံနဲ့ အရောငျးမတူသူတိုငျးကို ပေါငျးစုံဆဲ ခဲ့တာ အဖွလေား ငါ့ကို ဘာမှ မလုပျထားတဲ့ အဖှဲ့စ ညျး တှကေို ငါအမုနျး မရှိဘူးလေ မငျးတို့လို လိုကျမမုနျးလို့ ငါ့ကိုဘောမဆိုတော့မအလေိုး လျော ဘီတှေ မငျးမသော မငျးတို့လိုးလိုကျတော့ .
လောဘီ နဲ့ Blame နဲ့ လဲ မတူပွနျဘူး .Blame တာ အပြျောသကျသကျ . ဒါပမေယျ့စဉျးစားပါ . BLAME တဲ့ ညီလေး ညီမလေးတှလေညျးအခု နိုငျငံပါ ထိပွီ . အဲ့ဒါ ကောငျးလား အမုနျးတရား တှေ စလူံ့ဆျောခဲ့တဲ့ လူမြား ကိုယျ့လုပျရပျ မှနျခဲ့ သလား စဉျးစားပါ .နောကျတဈခကျြမငျးတို့ ဆဲ ဆိုပွီး လာလာဆှနတောနျော .ငါ့ကိုမှ မဟုတျဘူး . အနီ မခြိနျးတဲ့ အနုပညာရှငျတိုငျးကို အဲ့ဒါက ရောအဖွလေား . အဈကို မခြိနျးဘူးလား .အဈမ မဝနျးရံ ဘူးလား လသေံမြိုး မဟုတျဘူးနျော ပရိတျသတျရဲ့ ထမငျးကို စားပွီး ဘာညာ အခုခြိနျးစမျး ဆိုတဲ့ ပုံစံ နဲ့ အမိနျ့ပေးတဲ့ လသေံ နဲ့ ပွောဆို ဆဲဆိုပွီး ခြိနျးခိုငျးတယျ . အနုပညာရှငျတှေ တျောတျော မြားမြားက ပရိတျသတျကို ကွောကျတယျ
အခု Live နဲ့ သှားမယျ့နရောကို လှငျ့ပေးမယျ .Videoကို အတို အစတှေ ထပျဖွတျညပျလုပျ လိုရာဆှဲတငျဦးမယျ . ဒါတှကေ နိုငျငံကောငျးနိုငျမယျဆို ဆကျလုပျ .ဟိုလူကို ဆဲ ဖို့ ဦးဆောငျ ဒီလူကို ဆဲဖို့ ဦးဆောငျကိုယျနဲ့ အမွငျမတူတိုငျး ဆဲဖို့ ဦးဆောငျဒါတှေ ကောငျးတယျထငျရငျ ဆကျလုပျUN ကိုချေါတယျ . ဟိုက လာရငျ လကွေောငျးက လာမှာ တနျးပဈမှာ . ငါတို့ မွို့စဈမွပွေငျ ဖွဈမှာ .ငွိမျးခမျြး မူ့ နဲ့ အဆငျအပွဆေုံး အဖွကေို ရှာတှနေို့ငျပါစေ . Fb ကို အကြိုးမရှိတဲ့ ဘကျကကြှနျတျောတို့ လူမြိုးတှေ ပိုအသုံးခခြဲ့ကတြယျ .ဘာဖွဈဖွဈ ဆဲမယျ ဆိုတာတှေ ပဲ ရှတေ့နျးတငျခဲ့တယျ .
တဈခြို့ အနုပညာရှငျတှလေညျး တဈခြို့ကိုပဲပွောတာနျော .အနုပညာဆိုတာ အနုပညာ လုပျဖို့ . အနုပညာကတြော့ ဘာမှ မလုပျတတျ Like မြားရငျပွီးရော .NLD ပုံရိပျကို အတနျးရှငျ ယူခဲ့ ကတြယျ .၅ နှဈလုံးမှာ မကွိုကျဆုံးအခကျြက အမှနျ တရားမရှိဘူး Acc မြားရငျ နိုငျတယျ . Fb နဲ့ အုပျခြူပျနတေဲ့ နိုငျငံတျောကွီး ဖွဈနတေယျ .နောကျ နာစီဝကျ ထှကျမယျ Live လှငျ့ပေးမယျ ကြှနျ တျော နား ဘယျသူ့မှလညျး ဝနျးရံတယျဆိုပွီး အနားမလာ နဲ့ အနားကပျရငျ အကုနျဓား နဲ့ထိုး မှာဒီ အခြိနျ ဘယျသူ့မှ မယုံဘူး ပူးသတျတဲ့ လူလညျး ဖွဈနိုငျခငျြဖွဈမှာ ကာလက မရိုးရှငျး ဘူး . ကြှနျတျော ခဈြသော လူမြား တဈယောကျမှ လာမဝနျးရံပါနဲ့ အနားလာကပျရငျ ရနျသူပဲ .မိတျဆှေ ရနျသူ ကှဲနအေောငျ မလာပါနဲ့
ကြှနျတျောတဈခုခု ဖွဈသှားရငျတော့ နောကျအဲ့လို ဦးဆောငျတဲ့နောကျကို မလိုကျကဖြို့ .ကြှ နျ တေျာ့ ကို ခဈြသော .ကြှနျတျော စိတျဓာတျကနြတေဲ့ အခြိနျအားပေးခဲ့သောကြှနျတျော ခဈြသော လူအယောကျစီတိုငျး ဆဲတာ အဖွေ မဟုတျဘူး အမုနျးတရားဆိုတာ အဖွေ မဟုတျဘူးဆိုတာ ကို လကျခံ ပေးကပြါ အဖွကေ အားလုံး စညျးလုံးရမှာပါ ခကျြခငျြးတော့ မဖွဈနိုငျပမေယျ့ .ငွိမျးခမျြးမူ့ ကို အခုထဲက ဦးတညျကပြါ